Taariikhda Iyo Muhiimada Ay leedahay Magaalada Saylac W/W Jamaal Ibraahim(Gobonimo) | Mandheera News
Saylac waxay dhacdaa dhanka waqooyi bari, ee gobolka Awdal ee Somaliland, Waa magaalo xeebeed taariikh dheer ku leh guud ahaan adduunka iyo Somaliland, waa magaalo taariikh wayn leh.
Saylac waxay jirtay Islaamka hortii sida ku cad tariikhda iyo asaarteeda qadiimka, Waxa la sheega oo taariikhyahanada aduunku isla qaateen ,Sayalac in boqortooyooyinkii ay Adal ka midka ahayd soo xukumi jireen, sida ku cad Buuga ay khubaro Giriiga oo cilmiga tariikhda ahi ay qoreen
Waxa ay ka mid tahay goobihii ugu horeeyey ee diinta Islaamku soo gaadhay. Sidoo kale waxa ku yaala oo raadkoodi muuqda ilaa imika Masjidka labada qiblo leh, ee midna Baytul-maqdis eegayo midna Kabcada.
1300 waxa soo gaadhay, qoraagii iyo taariikhyahankii reer Marooko ee Ibnu-Batuuta sida uu ku sheegay Buugiisa Al-buldaani inuu ka soo kicitimay dalka Yemen, safarna soo ahaa mudo Afar cisho ah oo uu badda ku soo jjray,
Waxaa uu yidhi Batuuta “ Saylac waa goobtii ugu horaysay ee aan qaarada Afrika cago dhigto, waxa ay ahayd magaalo weyn oo ganacsiyo ka socdaan. Waxa ku noolaa dad madow oo diinta islaamka haysta; mad habkeeda Shaaficiyada. Waxay lahayd oo kale suuq weyn oo lagu qalo xoolaha sida Geela,Adhiga, iyo lo’da, taas waxay ku cadaynaysaa taariikhda faca weyn ee dadkeenu leeyihiin.
Saylac waxay ahayd magaalo ganacsi iyo marin ay wax kala soo dagaan boqortooyadii ka talin jirtay Dalka itoobiya ee loo yaqaanay Abysiniya.
Waxa waqtigaa gaadiid u ahaa awr laga raran jiray Saylac oo ilaa Herer ilaa cidhifka kale lagu gaadhsiin jiray.
Qarnigii 1200 dii dhamaadkiisii waxa Saylac gacanta ku dhigay oo la wareegay markay arkeen istraajiyadeed iyo muhiimadeeda.
Waxa isla 1342,kii gacanta ku soo ceshaday Boqortooyadii islaamka ahayd ee halkaa laga aasaasay ee IFAT oo iyadu soo ceshatay Saylac.
Waxa in badan ka soo taliyey Hogaamiyihii caanka ahaa ee islaamka ee la odhan jiray Sacada-diin oo lagu magac daray Jasirada Sacaada-diin ee ku taala xeebta Saylac.
Waxa la sheegaa in Hogaamiyaha markii la dilay, ay qoyskiisu u qaxeen dalka Yemen. Mudo ka dib ay ku soo noqdaan iYagoo kaashanaaya dadkii Somaalida ahaa ee meesha degena ay dib u asaaseen Boqortooyadii Adal oo lagu caleemo saaray wiilkiisi curud ee Safru-diin Sacaada-diin.
halkaas oo ay boqortooyadii Adal ee halka magaca Awdal ka yimi ay iskaga danbeeyeen Qoyskii reer Sacaada-diin oo mudo soo xukumayey.
Horaantii qarnigii 16aad waxa Boqortooyadii Adal la wareegay oo hogaamiye u noqday „Axmed Ibrahin Al-qasi“ oo loo yaqaanay Axmed-Gurey kaas oo la isku khilaafsanaa qoomiyadiisa oo muran badan kaga jiraan tariikhyahanada, laguna sheego mar Somali inuu ahaa, Mar carabtii reer Saylac iyo quruumihii kale dhulka degenaa.
Saylac waxa si weyn loo aaminsan yahay in ay ahayd hooyadii magaalooyinka taariikhiga ee saaran Badda Cas iyo Badweynta Hindiya sida: Berbera, Musawac iyo Bender Qaasim, xataa ay ka qadiim sanayd Muqdisho, Marka, Malindi iyo Mombasa,
waxa kale oo aan la isku khilaaf sanayn in Saylac ahayd halkii saxaabadii Rasuulku (rc) ay ka soo degeen markii laga soo eryey Maka ee ay ku socdeen Ardul Xabasha (Ethiopia).
W/Q/ Jamaal Ibrahim Maxamed (Gobonimo)